Ahoana ny fomba famolavolana t-shirt amin'ny Adobe Photoshop sy mockups | Famoronana an-tserasera
Ny olona rehetra dia naniry hatrizay hatrizay mamolavola ny T-shirt anao manokana miaraka amin'ny endriny mahafinaritra sy mahatsikaiky indrindra sy mahatsikaiky indrindra hampisehoana amin'ny olon-drehetra ny fomba ananan'izy ireo manokana sy tany am-boalohany ny fitafiany, fomba iray am-boalohany ny fampifangaroana ny kantontsika miaraka amin'ny fomba fitafintsika sy ny fisehoantsika ivelany eo amin'ny fiainantsika isan'andro.
Amin'izao fotoana izao dia mora tokoa ny mitondra ny volavolan-tsaintsika amin'ny t-shirt, alohan'ny hahatongavan'izany dia ny fahitana ny endrik'ilay volavolanay, mora be izany noho ny sakaizantsika fanesoana, tsy isalasalana fa izy ireo no tsara indrindra mpiara-miasa amin'ny mpamorona sary satria vitany ny mampiseho amin'ny fomba tena izy a famolavolana amin'ny toerana tena izy, amin'ity tranga ity dia hianarantsika ny mampiasa a makety ny T-shirt.
Un makety iray ihany io fanehoana ny endrika nomerika amin'ny media nomerika izay maka tahaka ny valiny vita pirinty na amin'ny medium, izay vitsy monja kitika ahatratra isika fa ny endrikay dia voasambotra haingana sy mora nefa tsy mila manasarotra ny fiainantsika dia ho afaka hampiseho amin'ny mpanjifanay ny endrik'izy ireo alohan'ny hanaovana pirinty, ity dingana ity dia ilaina amin'ny mivarotra hevitra amin'ny karazana mpanjifa rehetra satria afaka mahita valiny akaiky kokoa ny zava-misy izy ireo, akaiky kokoa ny vokatra tadiavin'izy ireo hividy.
Ao anatin'ny vanim-potoana dizitaly miaraka amin'ny fandrosoana lehibe amin'ny rafitra fanontana ara-toekarena sy ny fisehoan'ny safidy marobe ho an'ny manonta T-shirt anao manokana, afaka misafidy mamorona akanjo ho antsika haingana isika, mora vidy ary am-boalohany miaraka amina endrika mampihomehy na andian-teny mahaliana.
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia misintona ny makety Tianay hampiasaina, amin'ity tranga ity dia nalainay ilay nomarihinay eto amin'ity pejy loharanom-pahalalana sary ity. Amin'ity pejy ity dia afaka misintona isa marobe isika fanesoana miovaova maimaim-poana afaka mampiasa azy ireo amin'ny tetikasanay sary sy ataovy mifankatia ny mpanjifa.
Raha vantany vao azontsika ny makety alaina, ny zavatra manaraka tokony hataontsika dia ny manokatra azy amin'ny Photoshop ho an'ny t aorianaesory ny volavolantsika amin'izany makety.
Raha vantany vao azontsika ny makety sokafy, ny zavatra manaraka tokony hataontsika dia tsindrio ny kapaoty nasiana loko mena, ity loko ity dia manondro fa ny sosona dia mifamatotra amin'ny sosona marani-tsaina hafa izay mamela antsika hanisy ny volavolainay ary hita ara-réalitialy izany amin'ny fanohanana t-shirt nomerika hitantsika amin'ny endrik'ilay makety.
Raha mijery akaiky ny varavarankely vaovao misokatra isika dia afaka manampy ireo sosona rehetra tadiavintsika, na izy ireo sary na lahatsoratraAmin'ity tranga ity, nanampy sary tokana izay namboarina mba hanana ny refy sy ny fametrahana azy manokana amin'ny endrika.
Ny mahatsara ny fanesoana vitantsika izany manova ny fiaviany Ny fahazoana manao an'io fomba io fa ny fanohanan'ny t-shirt antsika dia manova loko ihany koa, mety tsara izany hijerena ny fomba volavolainay amin'ny loko maro samihafa.
Mba hanovana ny fiavian'ilay rakitra, ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia mamorona sosona vaovao, aorian'izay dia handeha amin'ny menio ambony Photoshop izahay ary tsindrio eo manova / mameno, Hisokatra ny varavarankely vaovao izay tsy maintsy hisafidianantsika feo loko marina.
Raha vantany vao azontsika ny vola voaova asio loko hafa ao amintsika makety, ho vitantsika ny dingana hiasa miaraka amin'ny makety T-shirt ary azontsika atao ny mampakatra ny tolo-kevitra amin'ny tambajotran-tseraseranay mba hampisehoana amin'izao tontolo izao ny fahaizantsika rehetra.
Ny fampiasana makety Amin'ny sehatra manokana dia tena ilaina izy io satria manampy amin'ny fakana sary an-tsaina ny endrika nomerika amin'ny fomba tena marina kokoa, mahatonga ny mpanjifa hahatsapa fa ny endrik'izy ireo dia manakaiky ny zava-misy ara-batana. Isaky ny hatoky ahy ny mpanjifa amina endrika endrika ara-batana aho, ny ataoko dia ny manesoeso mba hampisehoana azy ireo ny endrika tsirairay.
ny fanesoana izy ireo dia ny majika mpamorona sary.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Ahoana ny fomba famolavolana T-shirt amin'ny Adobe Photoshop